We.com.mm - စတိတ်စင်မှာ ဖျော်ဖြေနေရင်း ဆံပင်ရိတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဂျေဒန် စမစ်
အသက် ၂၁ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ Karate Kid ရဲ့မင်းသားလေး ဂျေဒန်က သူ့စတိုင်နဲ့သူ အထာကျကျနေလေ့ ရှိသူဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ 2017 Met Gala ပွဲတုန်းကလည်း သူ့ရဲ့dreadlock ဆံပင်ကြီး ဖြတ်ပြီး ကိုင်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် ဆံပင်ရိပ်နည်းအသစ်ကို ချပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့(သြဂုတ် ၃ ရက်) တုန်းက တော်ရွန်းတိုမှာ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ဂျေဒန်ဟာ ဖျော်ဖြေနေရင်းနဲ့ လျှပ်စစ်ဆံပင်ရိပ်စက်နဲ့ သူ့ရဲ့တိုပြီးသားဆံပင်ကို ရိတ်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ သီချင်းဆိုနေရင်းနဲ့ကို ရိတ်ပစ်ခဲ့တာပါ။ အဲလိုရိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆက်ပြီး ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဂျေဒန်ရဲ့ အဖွဲ့သားထဲက တစ်ယောက်က စတိတ်စင်အနောက်ကနေပြီး ဂျေဒန်ဆံပင်ရိတ်နေတဲ့ပုံကို ရိုက်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီပုံကို ဂျေဒန်က သူ့ရဲ့IG မှာ ပြန်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Caption မှာ “Toronto, It Happens Thank You For The Love. Go Stream ERYS. #MSFTSrepToronto”ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ဂျေဒန်ရဲ့ IG Post အောက်မှာ အခြားသောအနုပညာရှင်တွေကလည်း အရွှန်းလာဖောက်ထားကြပါတယ်။ ဂျေဒန်ရဲ့ သူငယ်ချင်း တိုင်လာ က “ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ” လို့comment ပေးထားတာကို ဂျေဒန်မှ “မင်း ငါ့ကို အာရုံစိုက်အောင်လို့” ဆိုပြီး ပြန်ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ တိုင်လာဟာ သူ့ရဲ့ ရည်းစားပါဆိုပြီး ဂျေဒန်က စနောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ သူတို့၂ ယောက် အသိဆုံး ဖြစ်မှာပေါ့နော်။
အခုလိုမျိုး စင်ပေါ်မှာ ဆံပင်တွေ ရိတ်ပစ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်အချို့ကလည်း ပြောင်လှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Smith Family ဟာ ဗရုတ်သုတ်ခတွေပဲ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြစ်တင်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အဆိုးပြောပြော ဂျေဒန်ကတော့ ပရိသတ်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရသွားတာပဲလေ။ သူဒီလို လုပ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက attention ရှာချင်လို့ပဲလား၊ ဆံပင်ကို ချက်ချင်း ရိတ်ပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်သွားလို့ပဲလားဆိုတာတော့ သူပဲ အသိဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
နိုင်ငံခြားသူတွေလား ထင်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်လီမလေး (၃) ဦး
မိန်းမ မယူခင် အချိန်ယူပြီးတော့အရာရာ ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ မောင်မောင်အေး
အားလုံး အားကျစရာဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ R ဇာနည် နဲ့ ဝမ်း တို့ရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း 15 နှစ်ပြည့် ပါတီပွဲ